Amazon Cloudfront | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọnụahịa na-aga n'ihu ịdaba na nnabata na bandwidth, ọ ka nwere ike ịbụ ihe dị oke ọnụ iji kwado weebụsaịtị na ikpo okwu nnabata. Ma ọ bụrụ na ị naghị akwụ nnukwu ụgwọ, ohere nwere ike ịbụ na saịtị gị adịghị nwayọ nwayọ - na-efunahụ azụmahịa gị. Ka ị na-eche maka sava gị na-akwado saịtị gị, ha ga-anagide ọtụtụ arịrịọ. Fọdụ n'ime arịrịọ ndị ahụ nwere ike ịchọ ka ihe nkesa gị gwa ndị ọzọ
PacketZoom, ụlọ ọrụ na-emezi ngwa ngwa mkpanaka site na teknụzụ ịkparịta ụka mkpanaka na ngwa, kwupụtara mmekorita ya na Amazon CloudFront iji tinye CloudFront na ọrụ PacketZoom nke Mobile Expresslane. Ngwakọta azịza ahụ na-enye ndị mmepe ngwa mkpanaka nke mbụ na naanị ikpo okwu mkpanaka maka mkpa ọrụ arụmọrụ ha niile. Ọ bụ nke mbụ na-na-otu mobile n'elu ikpo okwu na-agwa niile arụmọrụ mkpa n'ihi na mobile ngwa ọdịnala - mmesho, ikpeazụ-mile arụmọrụ, na n'etiti-mile arụmọrụ. Isi ihe nke ọrụ ahụ gụnyere: Mobile Expresslane nke PacketZoom